Fanavaozana ny firmware ho an'ny AirPods 2 sy Pro - SmartMe dia nipoitra
Andro vitsy lasa izay, nivoaka ny kinova vaovao an'ny firmware ho an'ny AirPods 2 sy AirPods Pro. Jereo ny fomba hijerena raha nohavaozina ny headphone sy ny fomba hanandramanao hanafainganana ny fizotran'ny fanavaozana.
Ahoana ny fomba hijerena raha manana fanavaozana izahay?
Mba hijerena ny kinova rindrambaiko dia mila mandeha any amin'ny sehatr'asa Bluetooth isika ary tsindrio ny anaran'ny fonon-tsika ary jereo ny "kinova". Raha mahita ny 3A283 izahay dia mbola mampiasa ilay rindrambaiko taloha. Ilay kinova vaovao ho an'ny AirPods 2 sy Pro dia antsoina hoe 3E751.
Fomba tsara hanatsarana ny fametrahana ny headphone anao amin'ny tranga iray izay tafiditra ao anatiny. Mila avelantsika hisokatra izy ireo ary hifandray amin'ny famandrihana ny iPhone nampifandraisin'izy ireo. Aorian'ny minitra vitsy dia afaka manamarina raha nitondra ny vokatra irina ny fitsaboana antsika.
Azo inoana fa ny kinova vaovao dia hanana olana vitsy kokoa amin'ny fifandimbiasana eo amin'ny fitaovana. Hiteraka fanelingelenana vitsy kokoa izany rehefa manomboka fifandraisana. Ny fomba tsara iray hanaovana "force update" dia ny fampifandraisana ny telefaoninao amin'ny tamba-jotra Wi-Fi ary hanala sy hampifandray ny headphones. Avy eo, mandritra ny 30 segondra farafahakeliny, tokony hilalao na inona na inona avy amin'ny Apple Music isika, ary avy eo apetraka ao anaty boaty mifandray amin'ny famatsian-herinaratra ny headphones. Andramo izany ary ampahafantaro ahy!
Misy ny fanavaozana Apple vaovao izao. Inona no hiova?
vaovao farany, paoma, iOS
Apple dia namoaka kinova vaovao momba ny rafitra ho an'ireo mpitsapa. Miresaka momba ny iOS 14.6 beta, macOS 11.4 beta ary watchOS 7.5 beta isika eto. Navoaka tamin'ny Jona ny kinova farany. Inona no hiova ao amin'ny Apple? Nanapa-kevitra ny orinasa fa hanome fitsapana miaraka ...
IPhone kely amin'ny vidiny ambany. Angamba mendrika ny manandrana ilay maodely mini 12?
paoma, iPhone, iPhone 12 mini
Fampiroboroboana lehibe ao amin'ny magazay Neonet! Manomboka izao, somary hadino sy tsy raharahian'ny mpanjifa taorian'ny hafanam-po, ny iPhone 12 mini dia misy amin'ny vidiny tena manintona! IPhone vaovao amin'ny vidiny fanampiny! Ny smartphone izao dia mitentina PLN 2799. Is ...